Dhismaha xukumada cusub Farmaajo iyo Khayre taladaan iga qaata: Maxay Madaxda Soomaalidu ka baran karaan Paul Kagamaha Rwanda | Arlaadi Online
Home Blog Dhismaha xukumada cusub Farmaajo iyo Khayre taladaan iga qaata: Maxay Madaxda Soomaalidu ka baran karaan Paul Kagamaha Rwanda
Dhismaha xukumada cusub Farmaajo iyo Khayre taladaan iga qaata: Maxay Madaxda Soomaalidu ka baran karaan Paul Kagamaha Rwanda
Dhismaha xukumada cusub Farmaajo iyo Khayre taladaan iga qaata: Maxay Madaxda Soomaalidu ka baran karaan Paul Kagamaha Rwanda.
Waa talo la soo tijaabiyay oo horey u shaqeysay si lo helo Wasiiro leh tayo karti iyo hufnaan. Dalka Rwanda oo ay ka jireen duruufo la mid ah kuwa ka jira Soomaaliya ayaa Madaxweynaha dalkaas Paul Kagame wuxuu ku guuleystay inuu in badan soo dhiso xukuumad tayo leh.
Madaxweyne kagame sida hada haysata Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Khayre ayaa waxaa uu caqabad adag kala kulmi jiray siyaasiyiinta iyo hoggaamiye beeledyada dalkaas oo ku cadaadin jiray inuu wasiiro u magacaabo shakhsiyaad ay wataan, taaso ah caqabada hada haysata Farmaajo iyo Khayre.
Muxuu sameyay Madaxweyne Kagame si uu usoo dhiso xukuumad tayo leh? Siduu xal ugu helay oo uga gudbay caqabadaha ay hordhigeen hoggamiyaasha daneystayaasha ah?
Madaxweyne Kagame wuxuu sameyay inuu ka saxiixo heshiis ama (contract)
Intii u ololeeynaysay oo ku cadaadinaysay xukuumada in wasiiro loogu daro. Heshiiskaasi wuxuu dhigaayey:
1- In wasiirada la magaacbo ay muddo bil ah kusoo gudbiyaan barnaamijkooda waxqabad iyo siyaasada ay rabaan inay ku hoggaamiyaan wasaaradooda. Wasiirkii awoodi waayo shaqada waa laga erin.
2- In dadka ay wataan hadey kasoo bixi waayaan shaqadooda inuu shaqada ka eryi doono oo markaa ka dibna ay Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha toos usoo xulan doonaan ciddi ay doonaan iyada oo aan lagala tashan kooxdii keentay wasiirka shaqada laga eryay.
3- Wasiirkii lagu helo Musuq-maasuq in loo diri doono Maxkamad hadii lagu helo denbiga ah xatooyo xoolo qaran inuu mutaysan doono xabsi sidoo kale ay Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha ku badeli doonaan ciddi ay doonaan.
Intaa ka dib maxaa dhacay, waxaa dhacday in muddo gaaban gudaheed ay 80% wasiiradii ay soo gudbiyeen kooxahii daneystayaasha ahaa ay dhacen oo qaarna lagu eryay shaqo gudasho la’aan, qaar kalena loo xiray Musuq-maasuq ay ku kaceen, booskoodiina ay Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaarihiisa ku badasheen xubno leh Aqoon, Amaano, Karti iyo hufnaan oo dadkooda iyo dalkooda daacad u ah.
Talaabada Madaxweyne Kagame waxay keentay inuu helo xukuumad tayo leh, waxaana niyad jabay kooxihii caqabada ku ahaa dhismaha dowlad wanaagsan oo tayo leh. Waxaa sidoo kale niyad jabay siyaasiyiintii ma shaqeystayaasha ahaa ee xilka wasiirnimo u rabay si ay u lunsadaan hantida qaranka. Wixii intaa ka danbeeyay mar walba oo ay Madaxda dalka Rwanda soo dhisayaan xukuumad cusub wax dhib ah lama aysan kulmi jirin oo waxaa meesha ka baxay caqabadihii horey u jiray waxaana u fuduudaatay inay si dhib yar usoo xushaan ciddi ay u arkaan inay xilkooda kasoo bixi karaan.
Waxaan kula talin lahaa Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Khayre inay ka faaideystaan khibradaas lagu soo tijaabiyay dalka Rwanda si loo helo xukuumad tayo leh oo danta dadka iyo dalka ka shaqeeysa. Waxaan idiin soo gudbin doonaa Inshaallah qaabkii uu dalka Rwanda u maray dib u heshisiinta shacabka dalkaas.